Fofifa Cala – Alaotra Mangoro Avotra amin’ny masomboly fa mbola betsaka ny olana | NewsMada
Tsy lafiny iray fotsiny no mila hetsehina ho fampandrosoana ny fambolena. “Efa ahafahana mamokatra tsara amin’izay raha tahin’Andriamanitra ny Foibem-paritry ny fikarohana momba ny fampandrosoana ny ambanivohitra (Fofifa-Cala) aty Alaotra, taorian’ny fanampian’ny Japoney, natolotra nandritra ny foara Tangorona teo”, hoy ny tale, Dr Razafindrakoto Charlotte. Lafiny roa ny tiany ho tondroina amin’izany : azo antoka izao na misy na tsy misy orana ny famatsiana rano io foibe io. Noho izany, afaka manao ny asa fikarohana masomboly, araka izay takian’ny toetr’andro, ankoatra ireo masomboly 5.402 misy tahiriziny, izay tsy vary fotsiny ihany.
Dingana iray ihany io vita io, satria tsy mbola tanteraka hatreto ny fiantohana tanteraka ny tsena ato anatiny na sompitr’i Madagasikara aza Alaotra. 200.000 t ny vary mbola hafarana any ivelany. Fanamby iray hafa ny ho lasa mpamatsy sakafo ireo firenena ato amin’ny ranomasimbe Indianina.
Rehefa tena dinihina, ampahany bitika amin’ny olana maro ihany ny voavahan’ny Fofifa –Cala. Olana iray goavana ny ateraky ny fahasimban’ny tontolo iainana ao amin’ny faritra : nofon-tany mora andairan’ny asa ratsin’ny riaka. Atsanga mihamatevina isan-taona na “bedana” ny fiantso azy, manimba tanimbary 60.000 ha sy manototra ny farihin’Alaotra. Tongolo sy anana sisa volena asolo ny vary, nefa tsy vanona tsy ahitam-bokatra. Tsy ampy koa ny rotsak’orana !
Aiza ho aiza ny tetikasa Prodaire* ?
Aiza ho aiza izao ny fanapariahana ny Prodaire, tetikasa fiarovana ny nofon-tany, naseho any amin’iny faritra iny, nambara fa hampiraisan-dalana ny famelomana sy fiarovana ny tontolo iainana ho fampandrosoana maharitra ny eny ambanivohitra ? Mety hahomby io tetikasa io, araka ny kisarisary naseho, hiarovana ny tontolo iainana ary asa azo hiveloman’ny olona. Tsy hita anefa izay fanatanterahana izany tetikasa izany, lesoka manapotika ny fambolena.
Prodaire* : Projet de développement de l’approche intégrée pour promouvoir la restauration environnementale